🥇 Inkqubo yokuhlaziya amazinyo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 613
Inkqubo yokuhlaziya amazinyo
Ividiyo yenkqubo yokusebenzisa ubuchwephesha bamazinyo
Yenza iodolo yenkqubo yokuhlaziya
Ukuzenzekelayo kwamazinyo kukhula ngokukhawuleza ngenxa yokufumaneka kweetekhnoloji ezizisebenzelayo. Inkqubo ye-automation yamazinyo, enye yeendlela zobuchwephesha bokuzenzela amazinyo njengoluhlobo lomsebenzi weshishini, iyasetyenziswa, kodwa kunqabile. Unokufumana iikopi ezinqabileyo zeenkqubo ezizenzekelayo zamazinyo kwi-Intanethi, kodwa zonke ezi zifuna ukuhlawulwa rhoqo ukuze zivunyelwe ukuba zisebenze kuyo, okanye ziswele nje ukusebenza ngokubanzi umntu angathanda ukukubona kwisicelo esinje. Ngaphandle koku kungasentla yi-USU-Soft-inkqubo entsha yokuzenzekelayo yamazinyo. I-USU-Soft imanyene zonke iimpawu ezinokuthi abantu abonwabileyo bazonwabele ukuzibona ku-automation yamazinyo. Inkqubo ye-automation dentistry kulula ukuyisebenzisa kwaye ayenzi iimfuno zenyanga zemirhumo yokubhalisela ukusebenza kuyo. Inkqubo yokuzenzekelayo yamazinyo isebenza nakwikhompyuter elula yasekhaya kwaye akukho zixhobo zikhethekileyo ziyafuneka kuyo. Umthombo wemisebenzi luluncedo olukhulu, kuba inkqubo yamazinyo inokufumana indlela yokusebenza kwayo nayiphi na iklinikhi yamazinyo kwaye iyazise ngendlela ezenzekelayo. Ngoncedo lwenkqubo yokuzenzekelayo yamazinyo, ulawula iiyure zomsebenzi zabasebenzi, yenza idinga nezigulana, lawula amayeza, ubale iindleko zonikezelo lweenkonzo, kwaye usebenza noluhlu lwamaxabiso aliqela kunye namaqela ahlukeneyo abathengi Kanye.
Inkqubo ye-USU-Soft dentistry automation ayifuni lukhulu kwikhompyuter yakho kwaye ifuna kuphela indawo ukuze ikwazi ukusebenza ngempumelelo. Kwaye ungagcina ulwazi njengekopi yogcino kwi-USB drive rhoqo, ukwenzela ukuba xa kukho into eyenzekayo, ufumane ulwazi lwakho ngokulula. Inkqubo yokunyanga amazinyo inxibelelana nababhalisi bezemali, abashicileli beerisithi, zona eziququzelela isantya somsebenzi kunye nabathengi kwaye ikuvumela ukuba ubanike uxwebhu lwemali njengobungqina bentlawulo yeenkonzo. Ngoncedo lwenkqubo ye-USU-Soft ye-dentistry automation, ubeka ulawulo kunye neenkqubo zomsebenzi olungeleleneyo osebenza ngokoqobo kwi-automode. Kwangelo xesha, ukusebenza nezigulana kuya kukhawuleza kakhulu, kukuvumela ukuba unikeze iinkonzo kubantu abaninzi. Oku kukuvumela ukuba ukhule ube yinkokeli phakathi kweentshaba kwaye ufumane umvuzo ongaphezulu.
Ukwenza isigqibo sokuzenzekelayo kwiklinikhi, kuya kufuneka uqaphele izibonelelo zokuphumeza obu buchwephesha. Siza kudwelisa, ngokoluvo lwethu, ezona zibonelelo ziphambili (ezoqoqosho kunye nezinye) ezinokuthi zifumaneke kwiklinikhi yamazinyo okanye kwiziko lonyango ekuphunyezweni kwenkqubo yolawulo oluzenzekelayo lokuzenzekelayo kwamazinyo. Ezi zibonelelo zingabekwa ngokwamaqela kwezi ngxaki zilandelayo. Okokuqala, kukukhutshelwa ngaphandle okanye ukunciphisa izoyikiso kwishishini ngabasebenzi abanganyanisekanga (ukuthunyelwa kwezigulana unyango oluhlawulelweyo kwezinye iiklinikhi, ukubonelelwa ngeenkonzo zesithunzi, inkunkuma yezinto ezisetyenziswayo). Okwesibini, kukuqeqeshwa kwabaguli ngokwezezimali (njengoko kuboniswa xa kusenziwa, ukungabikho kolawulo olufanelekileyo kulawulo, ukungahlawulwa kwezigulana kunokubangela umonakalo omkhulu kwinkampani) Okwesithathu, ukwanda kokuhamba kweeklinikhi zizigulana ngokusebenza sebenza kunye neenkcukacha zabathengi (iimviwo zokuthintela, iifowuni zokuqhubeka nonyango); ukuncitshiswa kokungabikho kwabaguli ngefowuni kunye nezikhumbuzo zeSMS
Rhoqo oogqirha eziklinikhi abayilawuli intlawulo yesigulana, bayishiya isazela solawulo. Oku kunokuthethelelwa, kuba ugqirha kufuneka abe nomdla ikakhulu kunyango. Inkqubo yekhompyuter ye-automation yamazinyo ikuvumela ukuba ulandele ngokucacileyo abanamatyala, ubakhumbuze ngamatyala abo kutyelelo lwesigulana olulandelayo, kwaye ugcine umkhondo wexesha leenkqubo zabo zeinshurensi. Ungazikhusela njani kwilahleko? Inkqubo yokuzenzekelayo kwamazinyo inokukhumbuza ngetyala kungekuphela nje ngexesha lokubhaliswa kweenkonzo ezinikezelweyo, kodwa kwanangexesha lokufika kwesigulana okanye nangomzuzu wobhaliso lwesigulana kwishedyuli. Oku kuvumela umlawuli ukuba akhumbuze isigulana ngetyala kwangexesha, kwaye mhlawumbi uhlehlise iinkonzo ezongeziweyo zexabiso de ityala lihlawulwe. Imodyuli ekhethekileyo ('yokuThengisa') ikuvumela ukuba ukhethe abantu abanamatyala ukuze usebenze nabo ngokukodwa ukuvala ityala. Inkqubo ye-USU-Soft ye-dentistry automation ikhumbuza malunga neenkqubo ze-inshurensi eziphelelwe lixesha.
Sinikezela ngenkqubo yemisebenzi emininzi esemgangathweni ehambisa yonke imiba yeklinikhi yamazinyo kwaye konke oku ngexabiso elifikelelekayo. Isicelo se-USU-Soft siqukethe iimodyuli zesoftware enexabiso eliphantsi ezikumgangatho ophezulu ezinokuthi zisebenze ngokukhetha okanye njengoko kufuneka. Iimodyuli zithengwa kube kanye kwaye akukho ntlawulo inyanzelekileyo yobhaliso.
Isicelo se-USU-Soft sinokubizwa ngokuba yindawo yonke, njengoko inokuhlengahlengiswa kulo naliphi na ishishini. Sivavanye iinkqubo ezininzi ezifanayo, siqwalasele iimpazamo ezenziwa ngabadwelisi beenkqubo ezininzi kwaye bafikelela kwisigqibo sokuba inkqubo yethu mayibe lula ngangokunokwenzeka, ukwenzela ukuba inkqubo yokusebenza kuyo ibelula kwaye ingabi nzima. Ngenxa yoko, ufumana inkqubo enokwenza ukuba iinkqubo ezisebenzayo zibengcono, kunye nomgangatho omtsha wesantya kunye nokuchaneka. Ubuchule besicelo abunakukumangalisa ngamandla oomatshini abazihambelayo beetekhnoloji zale mihla. Kuphela ziitekhnoloji eziphambili ezinokuqinisekisa impumelelo kwinkampani yakho.
Unyango lwamazinyo kunye namazinyo
Ukwenza ingxelo yobugqirha kumazinyo
incwadi yokunikeza ingxelo yobugqirha bamazinyo
accounting yeklinikhi yamazinyo
ubalo lweofisi yamazinyo
accounting kagqirha wamazinyo
Ugcino lwezigulana kubugqirha bamazinyo
uphicotho lomsebenzi wamazinyo
Iinkqubo zekhompyuter zonyango lwamazinyo
lawula kwikliniki yamazinyo
Ikliniki yamazinyo ezenzekelayo
Ulawulo lweklinikhi yamazinyo
Inkqubo yeklinikhi yamazinyo
Inkqubo yolawulo lweofisi yamazinyo
Ulawulo lwe-polyclinic yamazinyo
iinkqubo zeenkonzo zamazinyo
irejista yobuchwephesha bamazinyo
ubhaliso logqirha wamazinyo kunye nokugcina imbali yezonyango
ulawulo lwangaphakathi kuzinyo lwamazinyo
ukugcina imbali yezonyango kubugqirha bamazinyo
ubalo lwezinto ezibonakalayo kuzinzo lwamazinyo
ulawulo lwemveliso kwisazinyo
Inkqubo yeziko lamazinyo
Inkqubo yekliniki yamazinyo
Inkqubo yolawulo lwamazinyo
Inkqubo yeofisi yamazinyo
Inkqubo yoogqirha bamazinyo
Inkqubo yonyango lwamazinyo
Inkqubo yobalo yobalo lwamazinyo
Inkqubo yogqirha wamazinyo
ulawulo olusemgangathweni kugqirha wamazinyo
Iphepha lomsebenzi wobugqirha bamazinyo